Denis Suárez oo ka hadlay dareenkiisa kadib guushii uu xalay ku hogaamiyay kooxdiisa Barcelona – Gool FM
Denis Suárez oo ka hadlay dareenkiisa kadib guushii uu xalay ku hogaamiyay kooxdiisa Barcelona
(Barcelona) 06 Dis 2018. Ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Barcelona Denis Suárez ayaa wuxuu ka dhawaajiyay sida uu ugu faraxsan yahay inuu qeyb ka noqdo kulankii ay xalay kula ciyaareen kooxda Leonesa Copa del Rey.
Denis Suárez ayaa ciyaarta kadib wuxuu wareysi ku bixiyay wargeyska caanka ah “Mundo Deportivo” ee dalka Spain.
“Waan ku faraxsanahay kulankan aan ciyaaray iyo goolasha aan dhaliyay”.
“Waxaan sidoo kale ku faraxsanahay ciyaartoyda markii ugu horeysay ciyaartay, 2 sano ayaan ku soo qaatay kooxda labaad, waan ka war qabaa sida ay xaalada tahay”.
“Waxaan qabaa inay jiraan heerar badan ee ku aadan dhanka akadeemiyadda, si kastaba waxaan doonayaa inaan ciyaaro inta ugu badan ee suurtagalka ah.
“Dareen keyga waa mid aad u fiican, ciyaartan waa tijaabo, waxaana qabaa inaan ku guuleystay, laakiin aan aragno hadii aan ciyaarayo kulanka soo aadan ee Sabtida, mar walba go’aanka wuxuu jiraa dhanka tababaraha”.
Kooxda Melbourne ee jaaliyada Soomaaliyeed dalka Australia iyo Xidigaha Gobolka Banaadir oo galabta ku balansan Banadir Stadium
"Messi nama soo gaari karo waayo wuxuu leeyahay Hal Farsamo oo kaliya.".- Kabtanka Barcelona oo si Xun dhulka loola galay